MM Popular – Page9– News And Videos
ရွှေတိဂုံ ဆရာတ်ာဘုရားကြီး ပေါက်ဂဏာန်း …Shareထားသူတိုင်းလက်တွေ့ပေါက်စေရမည်…ကွန်မန့်မှာ *ok* ရေးပြီး မြန်မြန်ရှယ်လိုက်ပါ…3dကြည့်ရန်ပုံကိုနှိပ်ပါ။
ရွှေတိဂုံ ဆရာတ်ာဘုရားကြီး ပေါက်ဂဏာန်း …Shareထားသူတိုင်းလက်တွေ့ပေါက်စေရမည်…ကွန်မန့်မှာ *ok* ရေးပြီး မြန်မြန်ရှယ်လိုက်ပါ…3dကြည့်ရန်ပုံကိုနှိပ်ပါ။ (1) ဘုရား ဘုရား တူမလေးရေချိူးနေတုန်း ဦးလေးဖြစ်သူမှ မတရားပြုကျင့် လိင်ဆက်ဆံတဲ့ ဗွီဒီဖိုင်…….ဗွီဒီယိုကြည့်ရန် စာကြောင်းလေးကို နှိပ်ပါ။ ဘုရား ဘုရား နာမည်ကြီးနေတဲ့ ဖြူဖြူထွေးနဲ့စိုင်းစိုင်းခိုင်းလှိုင် ဟိုတယ်မှာ ဖောက်ပြန်နေတဲ့ ဗွီဒီယိုဖိုင်ကြည့်ပြီးကြပြီ…..မြန်မြန်နှိပ်ကြည့်လိုက်နော် မကောင်းရင်ကြိုက်သလိုပြော…….ဗွီဒီယိုကြည့်ရန် စာကြောင်းလေးကို နှိပ်ပါ။ OMG သဇင် ကိုအရှေ့ကနေ ကုန်းခိုင်းပြီး .. ဘဲကြီးကနောက်ကနေ စပါယ်ရှယ်ဆောင့်ပေးနေတာ ကြမ်းသလားမမေးနဲ့….အောကားကောင်းလေး…မြန်မြန်နှိပ်ကြည့်ထားလိုက်နော်…….ဗွီဒီယိုကြည့်ရန် စာကြောင်းလေးကို နှိပ်ပါ။ ဘုရားဘုရား ဟိန်းဝေယံနဲ့စိုးပြည့်သဇင် ပြင်ဦးလွင်ပန်းခြံထဲမှာ မဖွယ်မရာပြုလုပ်နေတုန်း ချောင်းရိုက်ထားတာတဲ့…….ဗွီဒီယိုကြည့်ရန် စာကြောင်းလေးကို နှိပ်ပါ။ (2) OMG ရွှေထူးနဲ့နန်းခင်ဇေယျာ ချောင်းသာဟိုတယ်မှာ ကားရိုက်ထွက်တုန်း စပါယ်ရှယ်ခိုးစားနေကြတာ …
“၉ တန်းကျောင်းသူဘ၀ထဲက အလှမယ်ဝင်ပြိုင်ခဲ့သူလေး” ချစ်စရာကောင်းတဲ့ကောင်မလေးက ဘယ်သူလဲဆိုတာ သင်သိပါသလား? 1998 ကျောင်းသားပွဲတော်မှာ မယ်ဝင်ပြိုင်တဲ့…. (အပြည့်အစုံဖတ်ရန်ပုံကိုနှိပ်ပါ)
ခဈြစရာကောငျးတဲ့ကောငျမလေးက ဘယျသူလဲဆိုတာ သငျသိပါသလား? 1998 ကြောငျးသားပှဲတျောမှာ မယျဝငျပွိုငျတဲ့သူမဟာ အဲဒီအခြိနျထဲခဈြစရာကောငျးပွီး လှပနတောပါ။ဓာတျပုံဟောငျးလေးတှကေို သတိတရနဲ့ထုတျပွလိုကျ သကျမှနျမွငျ့ဟာ သူမရဲ့ပရိသတျကိုအံသွစခေဲ့ပါတယျ။ 1 ဘု၇ား ဘု၇ား ယောက်ျားတိုင်း မသိသေးတဲ့ အံ့သြစရာ မိန်းမတိုင်းရဲ့ စိတ်အ၀င်စားဆုံး လိင်ကိစ္စတခု ဖော်ထုတ်လိုက်ပြန်ပြီ..။ . အရွယ်ရောက်ပြီးသူများ အပြည့်အစုံကြည့်ရန် နှိပ်ပါ။၁၈အောက်တွေမကြည့်ရ…..အပြည့်အစုံဖတ်ရန်စာကြောင်းကိုနှိပ်ပါ။ ဘုရား ဘုရား နာမည်ကြီးနေတဲ့ ကိုးထပ်ကြီးဘုရားဗေဒင်ဆရာအေင်ချစ်ပို ကောင်မလေးတွေကို မဖွယ်မရာပြုလုပ်နေတဲ့ ဗွီဒီယိုဖိုင်ထွက်ပေါ်…….ဗွီဒီယိုကြည့်ရန် စာတမ်းလေးကို နှိပ်ပါ။ တအားဆောင့်လိုက်ရာ အမလေး…ကျွတ်ကျွတ်ကျွတ်…နာလိုက်တာ မောင်လေး ရယ်….မညှာမတာ ၀င်သွားဖြင့် အော်လိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။ မြတ်နိူး သည် သိသိသာသာပင် ခါးကော့ကာတက်လာပြီး စိန်မြင့် ၏ ကျောပြင်အားပွတ်သပ်ပေးနေသည်…..အပြည့်အစုံဖတ်ရန်စာကြောင်းကိုနှိပ်ပါ။ Oh My God …
ချစ်သူများနေ့အမှီလေးတဲ့ ၇၅နှစ် နဲ့ ၂၅ နှစ် နှစ်ဦးသဘောတူ လက်မှတ်ရေးထိုးခြင်း
ချစ်သူများနေ့အမှီလေးတဲ့ ၇၅နှစ် နဲ့ ၂၅ နှစ် နှစ်ဦးသဘောတူ လက်မှတ်ရေးထိုးခြင်း 1 ဘုရား ဘုရား သူမကို အထွတ်အထိပ်သို့ အမြန်ဆုံးရောက်စေနိုင်မည့် လိင်ဆက်ဆံပုံ “၄” မျိူး……အပြည့်အစုံဖတ်ရန်စာကြောင်းကိုနှိပ်ပါ။ ဘုရား ဘုရား ၀တ်မှုံရွှေရည် နာမည်မကြီးခင်ကတဲ့……လုံးဝထင်မထားဘူး…….မြန်မြန်နှိပ်ကြည့်လိုက်နော် အံ့သြသွားစေရမယ်…………ဗွီဒီကြည့်ရန် စာတမ်းလေးကို နှိပ်ပါ။ ဘုရား ဘုရား ဇရပ်ပျက်ကြီးထဲမှာ နားနေတုန်း လူတွေအရှေ့မှာ စိတ်မထိန်းနိုင်တော့လို့ ထရံကြားထဲမှာပြီးသွားတဲ့ စုံတွဲချောင်းရိုက်…….ဗွီဒီကြည့်ရန် စာတမ်းလေးကို နှိပ်ပါ။ “ကိုရဲ…နွယ် မနေတတ်တော့ဘူး…လုပ်ပေးပါတော့” “ကောင်းလား…နွယ်” “တအားကောင်းလို့ ခက်နေတာ…မြန်မြန်လုပ်တော့ကွာ”….“ကို ထည့်လိုက်တော့မယ်နော်”…..အပြည့်အစုံဖတ်ရန်စာကြောင်းကိုနှိပ်ပါ။. ဘု၇ား ဘု၇ား ယောက်ျားတိုင်း မသိသေးတဲ့ အံ့သြစရာ မိန်းမတိုင်းရဲ့ စိတ်အ၀င်စားဆုံး လိင်ကိစ္စတခု ဖော်ထုတ်လိုက်ပြန်ပြီ..။ . အရွယ်ရောက်ပြီးသူများ …
ချဲဒိုင်တွေကို အမြင်ကပ်လို့ အခုဘဲတင်ပေးလိုက်တယ်နော် ပေါက်မှပေးတယ်မပြောနဲ့ ဒိုင်မပိတ်ခင် ထိုးကြပါ …. ပေါက်သီး ရပြီ ၈၅၃ တုန်းကလို တကွက်တည်းပြန်ပေးမည် ကွန်မန့်ကို ok လို့ရေးပြီး like and share လုပ်ပြီး မျှပေးပါ….
ချဲဒိုင်တွေကို အမြင်ကပ်လို့ အခုဘဲတင်ပေးလိုက်တယ်နော် ပေါက်မှပေးတယ်မပြောနဲ့ ဒိုင်မပိတ်ခင် ထိုးကြပါ …. ပေါက်သီး ရပြီ ၈၅၃ တုန်းကလို တကွက်တည်းပြန်ပေးမည် ကွန်မန့်ကို ok လို့ရေးပြီး like and share လုပ်ပြီး မျှပေးပါ…. ဘုရား ဘုရား သူမကို အထွတ်အထိပ်သို့ အမြန်ဆုံးရောက်စေနိုင်မည့် လိင်ဆက်ဆံပုံ “၄” မျိူး……အပြည့်အစုံဖတ်ရန်စာကြောင်းကိုနှိပ်ပါ။ ဘုရား ဘုရား ၀တ်မှုံရွှေရည် နာမည်မကြီးခင်ကတဲ့……လုံးဝထင်မထားဘူး…….မြန်မြန်နှိပ်ကြည့်လိုက်နော် အံ့သြသွားစေရမယ်…………ဗွီဒီကြည့်ရန် စာတမ်းလေးကို နှိပ်ပါ။ ဘုရား ဘုရား ဇရပ်ပျက်ကြီးထဲမှာ နားနေတုန်း လူတွေအရှေ့မှာ စိတ်မထိန်းနိုင်တော့လို့ ထရံကြားထဲမှာပြီးသွားတဲ့ စုံတွဲချောင်းရိုက်…….ဗွီဒီကြည့်ရန် စာတမ်းလေးကို နှိပ်ပါ။ “ကိုရဲ…နွယ် မနေတတ်တော့ဘူး…လုပ်ပေးပါတော့” “ကောင်းလား…နွယ်” “တအားကောင်းလို့ ခက်နေတာ…မြန်မြန်လုပ်တော့ကွာ”….“ကို …
” ဘာသာစုံ ဂုဏ်ထူးရှင်ဖြစ်လို့ ပျော်နေတဲ့ အောင်မင်းခန့် ” . မင်းသားချော နိုင်နိုင်းရဲ့ ညီဝမ်းကွဲလေးလည်းဖြစ် ကိုယ်တိုင်လဲ မင်းသားဖြစ်တဲ့ အောင်မင်းခန့်ကတော့ ဆုတံဆိပ်ကြီးကို ပိုက်လို့ ပျော်နေပါတယ် … အကြောင်းကတော့ … (အပြည့်အစုံဖတ်ရန် ပုံကိုနှိပ်ပါ)
သရုပျဆောငျအောငျမငျးခနျ့ကတော့ ဘာသာစုံ ဂုဏျထူးရှငျဖွဈရလို့ ပြျောနတေယျလို့ဆိုပါတယျ ။ ဘာသာစုံ ဂုဏျထူးဆိုလို့ ဆယျတနျးခုမှအောငျတာလားလို့ မထငျကွနဲ့ဦးနျော ပရိတျသတျကွီး … အောငျမငျးခနျ့ လကျရှိရိုကျကူးနတေဲ့ အံဝငျဂှငျကဇြာတျကားထဲမှာ အောငျမငျးခနျ့က ဘာသာစုံဂုဏျထူးရှငျ အဖွဈ သရုပျဆောငျနတောပါ ။ 1 ဘုရား ဘုရား တူမလေးရေချိူးနေတုန်း ဦးလေးဖြစ်သူမှ မတရားပြုကျင့် လိင်ဆက်ဆံတဲ့ ဗွီဒီဖိုင်…….ဗွီဒီယိုကြည့်ရန် စာကြောင်းလေးကို နှိပ်ပါ။ ဘုရား ဘုရား နာမည်ကြီးနေတဲ့ ဖြူဖြူထွေးနဲ့စိုင်းစိုင်းခိုင်းလှိုင် ဟိုတယ်မှာ ဖောက်ပြန်နေတဲ့ ဗွီဒီယိုဖိုင်ကြည့်ပြီးကြပြီ…..မြန်မြန်နှိပ်ကြည့်လိုက်နော် မကောင်းရင်ကြိုက်သလိုပြော…….ဗွီဒီယိုကြည့်ရန် စာကြောင်းလေးကို နှိပ်ပါ။ OMG သဇင် ကိုအရှေ့ကနေ ကုန်းခိုင်းပြီး .. ဘဲကြီးကနောက်ကနေ စပါယ်ရှယ်ဆောင့်ပေးနေတာ ကြမ်းသလားမမေးနဲ့….အောကားကောင်းလေး…မြန်မြန်နှိပ်ကြည့်ထားလိုက်နော်…….ဗွီဒီယိုကြည့်ရန် စာကြောင်းလေးကို နှိပ်ပါ။ …
“ရင်ခုန်စရာကောင်းတဲ့ သူတို့ရဲ့ Valentine” ဟိန်းဝေယံ နဲ့ စိုးပြည့်တို့ကတော့ ချစ်သူများနေ့မတိုင်ခင် ချောကလက်နဲ့ လက်ဆောင်တွေကို….. အပြည့်အစုံဖတ်ရန် ပုံကိုနှိပ်ပါ-
အနုပညာလောကရဲ့ ထိပျတနျးအနုပညာရှငျတှဖွေဈကွသလို ပရိသတျတှရေဲ့ အားပေးခဈြခငျမှုကိုလညျး ရရှိထားတဲ့ အနုပညာရှငျတှထေဲမှာ မငျးသား ဟိနျးဝယေံနဲ့ မငျးသမီး စိုးပွညျ့သဇငျတို့ လညျး ထိပျဆုံးက ပါဝငျပါတယျ။ သူတို့နှဈဦးဟာ အတှဲညီညီ ဗီဒီယိုဇာတျကားတျောတျောမြားမြားမှာ သရုပျဆောငျခဲ့ကွပွီး ပရိသတျတှရေဲ့ အားပေးမှုကို အပွညျ့အဝရရှိခဲ့ကွပါတယျ။ 1 ဘုရား ဘုရား တူမလေးရေချိူးနေတုန်း ဦးလေးဖြစ်သူမှ မတရားပြုကျင့် လိင်ဆက်ဆံတဲ့ ဗွီဒီဖိုင်…….ဗွီဒီယိုကြည့်ရန် စာကြောင်းလေးကို နှိပ်ပါ။ ဘုရား ဘုရား နာမည်ကြီးနေတဲ့ ဖြူဖြူထွေးနဲ့စိုင်းစိုင်းခိုင်းလှိုင် ဟိုတယ်မှာ ဖောက်ပြန်နေတဲ့ ဗွီဒီယိုဖိုင်ကြည့်ပြီးကြပြီ…..မြန်မြန်နှိပ်ကြည့်လိုက်နော် မကောင်းရင်ကြိုက်သလိုပြော…….ဗွီဒီယိုကြည့်ရန် စာကြောင်းလေးကို နှိပ်ပါ။ OMG သဇင် ကိုအရှေ့ကနေ ကုန်းခိုင်းပြီး .. ဘဲကြီးကနောက်ကနေ စပါယ်ရှယ်ဆောင့်ပေးနေတာ ကြမ်းသလားမမေးနဲ့….အောကားကောင်းလေး…မြန်မြန်နှိပ်ကြည့်ထားလိုက်နော်…….ဗွီဒီယိုကြည့်ရန် စာကြောင်းလေးကို နှိပ်ပါ။ …
“သူ့နာမညျ ရှရေုပျ” ရုပျရှငျဇာတျကားကွီးမှာ ဇာတျဆောငျမငျးသမီးတဈလကျအဖွဈပါဝငျတဲ့ သငျဇာဝငျ့ကြျောကတော့ ရိုကျကူးစဉျဖွဈတဲ့ ပရိုဂြူဆာ ရဲ့ ကိုယျခငျြးစာစိတျမရှိမှုနဲ့ ဒါရိုကျတာရဲ့ စကားပွောရငျ့သီးမှုမြားကွောငျ့ အဆငျမပွမှေုမြားဖွဈခဲ့ရပွီး လြျောကွေးငှပွေနျလြျောကာ ဆကျမရိုကျဖွဈတော့ဘူးလို့သိရပါတယျ ။ မကျြလုံးထိခိုကျတဲ့ထိဖွဈခဲ့ရတဲ့ သငျဇာဝငျ့ကြျောက ရိုကျကှငျးပျေါက အဖွဈမှနျတှကေို အောကျပါအတိုငျး ဖှငျ့ခပြွောပွလိုကျပွီး ဒီလိုပွောပွလို့ သူမကိုရငျဆိုငျလာ မယျတိုကျခိုကျလာဦးမယျဆိုလဲ မကွောကျပါဘူး လို့ဆိုပါတယျ ။ 1 ဘုရား ဘုရား တူမလေးရေချိူးနေတုန်း ဦးလေးဖြစ်သူမှ မတရားပြုကျင့် လိင်ဆက်ဆံတဲ့ ဗွီဒီဖိုင်…….ဗွီဒီယိုကြည့်ရန် စာကြောင်းလေးကို နှိပ်ပါ။ ဘုရား ဘုရား နာမည်ကြီးနေတဲ့ ဖြူဖြူထွေးနဲ့စိုင်းစိုင်းခိုင်းလှိုင် ဟိုတယ်မှာ ဖောက်ပြန်နေတဲ့ ဗွီဒီယိုဖိုင်ကြည့်ပြီးကြပြီ…..မြန်မြန်နှိပ်ကြည့်လိုက်နော် မကောင်းရင်ကြိုက်သလိုပြော…….ဗွီဒီယိုကြည့်ရန် စာကြောင်းလေးကို နှိပ်ပါ။ OMG သဇင် …
ဘုရားရေ …ကူညီထောက်ပံ့ပေးမယ့်သူမရှိ အကူညီမဲ့နေတဲ့ သနားစရာနှလုံးရောဂါသည် ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင်ဇာတ်ပို့အမေ ဒေါ်စံပယ်..နွမ်းပါးလှတဲ့သရုပ်ဆောင် ဇာတ်ပို့ အမေတစ်ယောက်ကိုတတ်နိုင်လောက်အကူညီပေးစေချင်ပါတယ်။ ဝိုင်းဝန်းကူညီပြီးshareပေးကြပါခင်ဗျာ။
ဇာတ်ပို့ သရုပ်ဆောင် ဒေါ်စပါယ် မြောက်ဥက္ကလာတော်ဝင်အထူး ကြပ်မတ်ဆောင်မှာ နှလုံးကုသနေရပါတယ်။ 1 ဘုရား ဘုရား တူမလေးရေချိူးနေတုန်း ဦးလေးဖြစ်သူမှ မတရားပြုကျင့် လိင်ဆက်ဆံတဲ့ ဗွီဒီဖိုင်…….ဗွီဒီယိုကြည့်ရန် စာကြောင်းလေးကို နှိပ်ပါ။ ဘုရား ဘုရား နာမည်ကြီးနေတဲ့ ဖြူဖြူထွေးနဲ့စိုင်းစိုင်းခိုင်းလှိုင် ဟိုတယ်မှာ ဖောက်ပြန်နေတဲ့ ဗွီဒီယိုဖိုင်ကြည့်ပြီးကြပြီ…..မြန်မြန်နှိပ်ကြည့်လိုက်နော် မကောင်းရင်ကြိုက်သလိုပြော…….ဗွီဒီယိုကြည့်ရန် စာကြောင်းလေးကို နှိပ်ပါ။ OMG သဇင် ကိုအရှေ့ကနေ ကုန်းခိုင်းပြီး .. ဘဲကြီးကနောက်ကနေ စပါယ်ရှယ်ဆောင့်ပေးနေတာ ကြမ်းသလားမမေးနဲ့….အောကားကောင်းလေး…မြန်မြန်နှိပ်ကြည့်ထားလိုက်နော်…….ဗွီဒီယိုကြည့်ရန် စာကြောင်းလေးကို နှိပ်ပါ။ ဘုရားဘုရား ဟိန်းဝေယံနဲ့စိုးပြည့်သဇင် ပြင်ဦးလွင်ပန်းခြံထဲမှာ မဖွယ်မရာပြုလုပ်နေတုန်း ချောင်းရိုက်ထားတာတဲ့…….ဗွီဒီယိုကြည့်ရန် စာကြောင်းလေးကို နှိပ်ပါ။ နွမ်းပါးလှတဲ့သရုပ်ဆောင် ဇာတ်ပို့ အမေတစ်ယောက်ကိုတတ်နိုင်လောက်အကူညီပေးစေချင်ပါတယ်။ ဝိုင်းဝန်းကူညီပေးကြပါခင်ဗျာ OMG ရွှေထူးနဲ့နန်းခင်ဇေယျာ ချောင်းသာဟိုတယ်မှာ …
853 တုန်းကလို ဒဲ့တွက်နည်းအတိုင်း admin ကတော့ အကြီုးကြီးထိုးထားပြီးပြီ… မပေါက်ရင် ၃ ဆ ပြန်ပေးမယ်ရဲရဲကြီး အာမခံတယ်…. ပေါက်သီးတွေဘဲ့ပေးလို့ တကြိမ်မှ မလွဲဖူးဘူးနော်… ပေါက်ဖူးသူတိုင်းလက်တွေ့သိတယ်… ok မန့် like နဲ့ share လုပ်ထား….16ရက်နေ့ သင်ချဲပေါက်စေရမည်။
853 တုန်းကလို ဒဲ့တွက်နည်းအတိုင်း admin ကတော့ အကြီုးကြီးထိုးထားပြီးပြီ… မပေါက်ရင် ၃ ဆ ပြန်ပေးမယ်ရဲရဲကြီး အာမခံတယ်…. ပေါက်သီးတွေဘဲ့ပေးလို့ တကြိမ်မှ မလွဲဖူးဘူးနော်… ပေါက်ဖူးသူတိုင်းလက်တွေ့သိတယ်… ok မန့် like နဲ့ share လုပ်ထား….16ရက်နေ့ သင်ချဲပေါက်စေရမည်။ (1) ဘုရား ဘုရား တူမလေးရေချိူးနေတုန်း ဦးလေးဖြစ်သူမှ မတရားပြုကျင့် လိင်ဆက်ဆံတဲ့ ဗွီဒီဖိုင်…….ဗွီဒီယိုကြည့်ရန် စာကြောင်းလေးကို နှိပ်ပါ။ ဘုရား ဘုရား နာမည်ကြီးနေတဲ့ ဖြူဖြူထွေးနဲ့စိုင်းစိုင်းခိုင်းလှိုင် ဟိုတယ်မှာ ဖောက်ပြန်နေတဲ့ ဗွီဒီယိုဖိုင်ကြည့်ပြီးကြပြီ…..မြန်မြန်နှိပ်ကြည့်လိုက်နော် မကောင်းရင်ကြိုက်သလိုပြော…….ဗွီဒီယိုကြည့်ရန် စာကြောင်းလေးကို နှိပ်ပါ။ OMG သဇင် ကိုအရှေ့ကနေ ကုန်းခိုင်းပြီး .. ဘဲကြီးကနောက်ကနေ စပါယ်ရှယ်ဆောင့်ပေးနေတာ ကြမ်းသလားမမေးနဲ့….အောကားကောင်းလေး…မြန်မြန်နှိပ်ကြည့်ထားလိုက်နော်…….ဗွီဒီယိုကြည့်ရန် …
“ဝေဖန်မှုတွေပြင်းထန်နေတဲ့ မြင့်မြတ်နဲ့ ဝတ်မှုန်ရွှေရည်တို့ရဲ့ ဇာတ်ကားကြီး” “ကောလိပ်ဂျပိုး” ဇာတ်ကားကြီးဟာ အဆင့်နိမ့်တယ်ဆိုတဲ့ ဝေဖန်မှုတွေနဲ့အတူ…… အပြည့်အစုံဖတ်ရန် ပုံကိုနှိပ်ပါ-
မငျးသားကွီး နဝေငျးကို ကောလိပျဂငျြနဝေငျးရယျဆိုပွီး ပရိသတျတှေ ပါးစပျဖြားမှာ စှဲတှငျစခေဲ့တဲ့ “ကောလိပျဂပြိုး” ဇာတျကားကွီးကို မွငျ့မွတျ ဝတျမှုနျရှရေညျတို့နဲ့ ပွနျလညျရိုကျကူးခဲ့ပွီး ယခုလကျရှိရုံတငျပွသလကျြရှိတယျလို့သိရပါတယျ။ ဆရာဇဝနရဲ့ နာမညျကွီး ဝတ်ထုကိုပွနျလညျရိုကျကူးခဲ့တာဖွဈပွီး တက်ကသိုလျကောလိပျကြောငျးသားတှရေဲ့ ပြျောရှငျစရာပုံရိပျတှကေို မွိုငျမွိုငျဆိုငျဆိုငျတှမွေ့ငျရမှာလညျး ဖွဈပါတယျ။ 1 ဘုရား ဘုရား တူမလေးရေချိူးနေတုန်း ဦးလေးဖြစ်သူမှ မတရားပြုကျင့် လိင်ဆက်ဆံတဲ့ ဗွီဒီဖိုင်…….ဗွီဒီယိုကြည့်ရန် စာကြောင်းလေးကို နှိပ်ပါ။ ဘုရား ဘုရား နာမည်ကြီးနေတဲ့ ဖြူဖြူထွေးနဲ့စိုင်းစိုင်းခိုင်းလှိုင် ဟိုတယ်မှာ ဖောက်ပြန်နေတဲ့ ဗွီဒီယိုဖိုင်ကြည့်ပြီးကြပြီ…..မြန်မြန်နှိပ်ကြည့်လိုက်နော် မကောင်းရင်ကြိုက်သလိုပြော…….ဗွီဒီယိုကြည့်ရန် စာကြောင်းလေးကို နှိပ်ပါ။ OMG သဇင် ကိုအရှေ့ကနေ ကုန်းခိုင်းပြီး .. ဘဲကြီးကနောက်ကနေ စပါယ်ရှယ်ဆောင့်ပေးနေတာ ကြမ်းသလားမမေးနဲ့….အောကားကောင်းလေး…မြန်မြန်နှိပ်ကြည့်ထားလိုက်နော်…….ဗွီဒီယိုကြည့်ရန် စာကြောင်းလေးကို နှိပ်ပါ။ ဘုရားဘုရား …